Dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo la muuddeyay - BBC News Somali
Markii hore kiiska wuxuu ku saabsanaa in ICJ ay dhagesan karto muranka laba dal ayna go'aan ka gaari karto.
Baarlamaanka Jaamacadda Carabta: Kenya waxay ku xadgudbeysaa "deris-wanaagga" Soomaaliya
Dood dheer ka dib, bishii February ee 2018-kii ayay maxkamadda cadaaladda caalamka ayaa go'aan ku gaartay inay dhageysan karto dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Go'aankii hore ee maxkamadda wuxuu u dhacay sida ay Soomaaliya dooneysay oo ahayd in khilaafka aan lagu dhameyn wadahadal ee ICJ horteeda lagu kala baxo.
Maxkamadda waxay meesha ka saartay doodda Kenya ee ah in labada dal ay muranka ku xalliyaan heshiiskii ay horey u wada saxiixdeen ee ahaa "Isfahan".
Xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay, ka dib markii dowladda Kenya ay Soomaaliya ku eedeesay in London ay ku "xaraashtay" ceelal shidaal oo ku yaala xuduuda lagu mursan yahay.
"Dowladda Soomaaliya waxay ka qoomameyneysaa hadalkii kasoo baxay dowladda Kenya ee ku saabsanaa eedeynta ah "in Soomaaliya ay iib geysay saliid ku jirta dhul ay Kenya leedahay". Soomaaliya waxay sidoo kale ka qoomameyneysaa go'aankii ay Kenya ku dalbatay inuu dalkeeda ka baxo safiirka Soomaaliya, iyadoo aan wax wadatashi ah la yeelanin dowladda Soomaaliya".
Lahaanshaha sawirka VillaSomalia
Image caption Abiy Axmed, Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa mar dhexdhexaadiyay Farmaajo iyo Uhuru
Xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya, Macharia Kamau ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray bishii February ee 2019kii ku sheegay: "Xadgudubkan aan wax loo dhiga lahayn ee sida sharci darrada lagu xoogayo hantida dadka reer Kenya, ma ahan mid laga aamusi karo, wuxuuna u dhigmaa fal cadawtinimo oo ka dhan ah dadka reer Kenya iyo hantidooda".
16 Juunyo 2019
"Muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya oo sii xoogeysan kara"
21 Maajo 2019